पुनः नहोस् आमहडताल, बन्द | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / पुनः नहोस् आमहडताल, बन्द
पुनः नहोस् आमहडताल, बन्द
Posted by: युगबोध in विचार February 21, 2018	0 85 Views
सरकारले अस्थायी राजधानी बुटवलमा घो षणा गर्दै छ भनी दाङबाट निर्वाचित सांसद कृष्णबहादुर महराले शुरु गराएको आन्दो लन माघ ३ गते रुपन्दे ही घो षणा भए पनि माघ ६ गते बे लुका राजधानी बुटवलै रह“दा पनि आन्दो लनकारीहरु लावालस् कर सहित प्राडो , मर्से डिज, स् र्काे पियो बाट लमही लाग्दा र ने ता काठमाडौ ंबाट हे लिकप्टरमा आएपछि लमहीमा तुहियो  । चार दिने आमहडताल दल बहादुरहरुको अर्थात जग्गा दलालहरुको भनी चित्रित गरियो  । संघीय संसदमा निर्वाचित कृष्णबहादुर महरा र प्रदे शसभामा निर्वाचित शंकर पो ख्रे लको पुतला दहन गरियो  । सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौ ज गरिए । संघीयताबिरुद्ध आवाज उठ्यो  ।.सरसफाइ अभियन्ता नारायण भुसालको ने तृत्वको आन्दो लनमा टायर बाली बाटो र बातावरण कालै बनाइएको थियो  ।
त्यसै क्रममा विप्लव माओ वादीले फागुन ८ गते आफ्ना ने ता कार्यकर्ताहरुको रिहाइ माग गर्दै ने पाल बन्दको आह्वान ग¥यो  । ने पालमा डे रा जमाएको बन्द,
हड्ताल र जुनसुकै क्षे त्रमा पनि राजनीतिक हस् तक्षे प प्रवृत्ति कसै का लागि माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिने अस् त्र दाङका ने ताहरुले पनि आत्मसात गरे  । कसै का लागि सरकारलाई बे इज्जती गनेर् माध्यम बन्यो भने सरकारले सुन्दै सुने न । असम्बन्धित सार्वभौ म सर्वसाधारण जनतालाई हात लाग्ने गरे को छ बढ्दो दण्डहीनता, खस् कदो जवाफदे हिता अनि टायरको धु“वा खानुपनेर् निर्विकल्पता । अरुको अधिकारको सम्मान र अस् ितत्व स् वीकार गर्न नसक्ने ले आफ्नो अधिकारको उपयो ग र त्यसको संरक्षण गर्न पनि सक्दै न । ने पालमा नागरिक हक संरक्षण गनेर् दायित्व बो के को सरकार र प्रत्ये क जिल्लाका गृह प्रशासनका प्रतिनिधिहरु कानून कार्यान्वयन गनेर् निकायको रुपमा प्रस् तुत हुनुपनेर् मा, कानूनभन्दा पनि सहमतिलाई कार्यान्वयन गनेर् निकायको रुपमा प्रस् तुत भइरहे को पाइन्छ ।
बन्दकारीहरु जति नागरिकलाई दुःख दियो र जनजीवन अस् तव्यस् त बनायो , त्यही मात्रामा आफू बलियो भएको प्रमाणित गर्छन् । सरकार, वस् तु तथा से वाप्रदायक, नागरिक समाजहरु बन्दका अगाडि निरीह बनिरहे का छन् । यस् तो अवस् थामा प्रत्ये क नागरिक आफै ले आफ्नो पे शा, व्यवसाय, आवत जावत र सवारी साधन खो ल्ने , सञ्चालन गनेर् हिम्मत नगरे सम्म र बन्दबिरुद्ध प्रतिकार नगरे सम्म यसको सास् तीबाट मुक्ति पाउने र नागरिक अधिकार रक्षा हुने दे खिदै न ।
बन्दले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा प्रताडित हुने , ठगिने आम ने पाली नै हो  । बन्दले मजदुरले छाक टार्न पाउदै न, किसानको दूध र तरकारी फाल्नुपनेर् हुन्छ, उद्यो ग टाट पल्टिन्छ । विद्यार्थी, स् कूल, कले जलगायत कसलाई पो बन्दले फाइदा गर्छ र ? जनतालाई दुःख दिन मात्र गरिने बन्द, हड्ताललाई किन रो ज्छन् ने पाली राजनीतिक पार्टीहरु ?
बन्दकै कारण यातायात आदिको अभावले कतिको ज्यान अकालमै जाने गरे को छ ? त्यसको वा जीवनको कुनै मूल्य छ ?
त्यो कुनै उपचारबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ? वा पै सामा दा“जे र त्यो जीवनको मूल्य पाउन सकिन्छ ? त्यस् तै शै क्षिक क्षति रुपिया“मा दा“ज्न सकिन्छ ? बन्दकै कारण कतिको काम छुटे को छ, कति बाहिरिदै छन् ? कति उद्यो गधन्दा धरायसी भए र कति हु“दै छन् ? विदे शी पू“जी यस् तो अवस् थामा भित्रिन्छन् त ? यसको हरहिसाब रुपिया“मा गर्न सकिन्छ त ?
सपरिश्रम कमाइ खाने अवसर तथा दुई छाक हातमुख जो ड्न पनि बञ्चित तुल्याउने यस् ता कार्यक्रम सदाका लागि बन्द हुनु आवश्यक छ । बन्द हड्तालले उद्यो ग व्यवसाय चौ पट हुन्छ र आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि ठप्प हुन्छन् । जुनसुकै दलको बन्द भए पनि झण्डा बो की मजदुर निस् कन्छन् । एकदिनको बन्दबाट यातायातमा ७० करो ड बढी तथा उद्यो ग व्यवसायबाट करीब ३ अर्ब २० करो ड रुपिया“ बराबरको घाटा लाग्ने बताइन्छ । तथ्यांकमा नआएको साना तथा मझौ ला कृषकहरुको करो डौ ं मूल्य बराबरको दूध, फलफूल, तरकारी कुहिन्छन् भने बजारमा महंगी बढ्छ ।
बन्दबाट वस् तुको भाउ महंगिएर व्यापारीहरुले यही मौ कामा कालो बजारी गर्दछन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार पनि उपभो क्तामा नै पर्दछ । ओ रालो लागे को गरिब अर्थतन्त्रलाई आर्थिक मन्दीले उसै संकटग्रस् त भइरहे को अवस् था छ । जसलाई बन्द, हड्तालले खुत्रुक्कै पार्दछ । अधिकारको नाममा जनताको व्यक्तिगत स् वतन्त्रता, हि“डडुलको अधिकारबाट कसै लाई बञ्चित गर्न पाइ“दै न । जनताले तिरे को करबाट चल्ने सरकारले जनताको सुरक्षा, सर्वसाधारण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति रो के र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपनेर् दायित्व हो कि हो इन ?
लाहुरे बने र कमाएको ने पालीले पठाएको विदे शी मुद्राले मात्र ने पालको आर्थिक स् िथति थे ग्नुपनेर् बाध्यता छ । सरकार र बै ंकप्रति व्यवसायिकता विश्वास घट्दो छ । लगानीको सम्भावना अझै न्यून हु“दै छ । रो जगारी पाउने संभावना छै न । बे रो जगारीका कारण सामाजिक विकृति बढ्दो छ ।
बढ्दो पू“जी पलायन भइरहे को छ जसको प्रमुख कारण पटक–पटक हुने ने पाल बन्द र आम हड्ताल जस् ता घातक कार्यक्रम नै हुन् । यस् ता कार्यक्रम मुलुकका लागि यति बढी प्रत्युपादक छन् कि कुनै पनि एक दे शका नागरिक यसको पक्षमा उभिन सक्दै न । हिम्मत गनैर् पर्छ, ने पालमा अस् ितत्वमा भएका दल संस् था जसले कुनै न कुनै समयमा बन्द, हड्तालका कार्यक्रम आह्वान गरे का छन् तिनी सबै अराष्ट्रिय वा अविवे की हुन या छन् ।
बन्द हड्तालले दे श पिरो लिएको लामो समय भइसक्यो , कहिले दे खि रो किने हो त्यसको कुनै संभाव्यता तथा टुंगो छै न । असुरक्षाका कारण दे शको पू“जी विदे श पलायन भइरहे छ, बन्दकै कारण दे शको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै छ, उत्पादनमा गिरावट आएको छ, समग्र मुलुकको आर्थिक प्रणाली गिदोर् छ । विदे शबाट भित्रिने हरुले नाकामै अलपत्र पर्नुपर्दछ । सरकारी कार्यालय बन्द हु“दा से वाग्राही त्यसै फर्कन्छन् । सर्वसाधारण जनताको आवागमन, पे शा, व्यवसाय सञ्चालनमा प्रतिकूल असर पारी, आर्थिक, सामाजिक, मनो वै ज्ञानिक, स् वास् थ्य, शिक्षा तथा समग्र मानवअधिकारका क्षे त्रमा पुग्ने बन्दको असर तथा क्षतिबारे पानेर् प्रभावप्रति अब सबै गम्भीर बन्नै पर्दछ । बन्दलाई सधै बन्द गरिनुपर्छ ।
अन्तमा, लो कतन्त्रको अभ्यास गनेर् नाममा छाडातन्त्र, अन्य विकल्प नदे खि बन्द हड्ताल गर्नु कायरताको पराकाष्ठा हो  । जनतामा डर पै दा गरे र बन्द सफल पानेर् काम दाङले पुन नदो हो ¥याओ स् ? बन्द आफ्नै मातृभूमिप्रतिको अनुचित कार्य हो  । त्यसकारण ने पाली सञ्चार माध्यम नागरिक समाज र बुद्धिजीवीले अभियानका रुपमै अघि बढी बन्द, हड्ताल आम बर्वादीको कारण, ने पाल आमामाथिको अपराधसरह सम्झी सामाजिक बहिस् कार गर्न जुर्मुराउन जरुरी छ ।
(न्याम्स, वीर अस्पताल काठमाडांै का बरिष्ठ कन्सल्टयाण्ट डे ण्टल सर्जन डा. बुढाथो की ने पाल चिकित्सक संघका के न्द्रीय सहको षाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
Previous: वादी महिलाको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मे लन दाङमा,‘अब जातीय तिरस्कार कसैले खेप्नुपर्दैन’
Next: एकता, बाध्यता र लचकता